Nyowani 'mamiriro ehunyanzvi' COVID kuyedzwa kuLiverpool John Lennon Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Nyowani 'mamiriro ehunyanzvi' COVID kuyedzwa kuLiverpool John Lennon Airport
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Liverpool John Lennon Airport ikozvino inogona kupa vanofamba nendege nenzvimbo-ye-iyo-ye-iyo-COVID yekuyedza nzvimbo padanho panhandare yendege sezvo ichatanga kutangazve hurongwa hwayo hwekubhururuka uye kuva nevamwe vafambi vanobhururuka zvakare.
Nyowani PCR bvunzo lab inovhura kuLiverpool Airport.
Lab nyowani inogona kuita bvunzo mazana mashanu pazuva.
Liverpool Airport ndeyokutanga muUK kuve nenzvimbo yakasarudzika.
British healthcare nekuyedza kambani Salutaris People - iyo inoshanda nekukurumidza PCR yekuyedza masevhisi evafambi vendege kuLiverpool John Lennon Airport, mukubatana neTest Assurance Group Ltd (TAG (Yepamutemo Covid-19 yekudyidzana naye kuLiverpool John Lennon Airport) - nhasi yazivisa iyo nyowani nyowani ye COVID yekuongorora marabhoritari kuLiverpool John Lennon Airport.
Iyo state-of-the-art chivakwa iri mukubatana neSource BioScience - inotungamira yepasirese mupi webasa rema laboratori kune vatengi muindasitiri yemishonga, hutano, kiriniki, hupenyu hwesainzi kutsvagisa uye biopharma maindasitiri - uye Salutaris Vanhu vari mubatanidzwa neTest Assurance Group Ltd (TAG) iri kupa COVID uye PCR kuyedza kuLiverpool John Lennon Airport.
Rabhoritari nyowani yakagadzirirwa kuitisa bvunzo mazana mashanu pazuva asi inogona kuwedzerwa zviri nyore muchiyero kuti ifambise bvunzo dze500 uye kupfuura kana zvichidikanwa. Kwayaka BioScience Yakagamuchirwa kune ISO 1000: 15189 zviyero uye zvakare iri DHSC yakanyorwa mupi weiyo COVID-2012 kuyedzwa.
Iyo sevhisi inopihwa neTag, Salutaris People, uye Sosi BioScience inogonesa vafambi vendege kuLiverpool John Lennon Airport uye avo vanobhururuka kubva kune vamwe UK nhandare iine Rapid Fit kuFly yekuyedza sevhisi neinoshandura nguva yemaawa matatu, padhuze neyakajairwa 3 awa Kukodzera kuFly kuyedza sevhisi. Samples inounganidzwawo panzvimbo yeLiverpool uye inogadziriswa paRuzivo Bioscience rabhoritari huru muNottingham inogonesa Zuva rechipiri, Zuva re24, Bvunzo Kusunungura uye yekuongorora PCR COVID yekuyedza sevhisi yevatengi.
Kutaura nezve zvivakwa zvitsva pa Liverpool John Lennon Airport, Wemabhizimusi Director Lucy O'Shaughnessy, akati:
“Tinofara kuve nhandare yekutanga kuUK kuve nenzvimbo uye sevhisi yakasarudzika. Liverpool John Lennon Airport ikozvino inogona kupa vatyairi vedu vanokosheswa nendege nenzvimbo yekuongorora yeECVID panzvimbo panzvimbo pano panhandare yendege apo patinotanga kutangazve hurongwa hwedu hwekubhururuka uye kuva nevamwe vafambi vanobhururuka zvakare. Nhandare inoramba ichivavarira kupa yakanakisa sevhisi sevhisi kune vatengi vedu nguva dzese. Kushanda takabatana neTest Assurance Group (TAG) / Salutaris People uye Source BioScience inoita kuti tikwanise kupa inoyevedza uye inoshanda PCR yekuyedza sevhisi inoshandiswa nevanovimba nezvevanoona nezvehutano. ”
Iyo nyowani nzvimbo - yega yega yerudzi rwayo kuUK airport - inoshandiswa nevashandi vana veelabhoritari tech kusanganisira mutariri wekuchinja uye ane 8 PCR vanoongorora panzvimbo, Bio Molecular Systems liquid inobata uye inotyaira cycler yekupa inokurumidza chaiyo- nguva yemhando yepamusoro PCR nzira yekuonekwa kweSARS-CoV-2.